Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Kronobergs län
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 24 10 2018
Gobolka Kronoberg iyo qeeybaha dhexe ee gobolka Småland waxeey caan ku yihiin soosaarida quraaradaha, waxeey kaloo caan ku yihiin dhulka dabiiciga ah ee qurxoon. Kronoberg waxey qani ku tahay balliyada iyo keymaha waxaana ka jira gaadiidka bulshada oo aad u fiican, tagana magaalooyinka ku yaal hareeraha gobolka.
Degmooyinka ku yaala Kronobergs län
Dooro degmada ah Kronobergs län ee aad doonaysid inaad wax dheeraad ah ka akhrisato xagga hoose
Dooro degmo Dooro degmo Älmhult Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö
Degmooyinka gobolka qaarkood waxaa ka jira guryo la'aan. Basaska iyo tareennada si fiican ayeey ugu shaqeeyaan degmada, dadka degmooyinka banaankooda degan ayaana faa'iido weyn ku qabo ineey gaadiidyadaas si fiican u shaqeynayaan. Jaanisyo dhinaca degida iyo shaqada ah ayaa ka jira degmooyinka gobolka qaarkood.
Akhri dheeraad ku saabsan shaqooyinka degmada Växjö.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Kronobergs län
Akhri dheeraad ku saabsan Jaamicada Linneuniversitetet.
Växjö waxaa ku yaal matxafka quraaradaha ee Iswiidhan, hiddaha iyo dhaqanka iyo maktabad casri ah.